Iloft enombono omangalisayo wepanorama - I-Airbnb
Iloft enombono omangalisayo wepanorama
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguPrashant
Iifestile zemifanekiso kumacala onke zibonelela ngembono yepanoramic yeRanka Valley kunye neencopho zeKanchendzonga. Nangona ibekwe embindini, ukuzola kunye nokuzola kwe-penthouse yenye yeendawo zayo ezininzi zokuthengisa. Iphangalele, nengaphakathi elifudumeleyo, elipholileyo leplanga, le migangatho mibini ikumgangatho ophakamileyo yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna indawo ezolileyo, efana nekhaya ngelixa besekumgama wokuhamba weMG Marg, indawo yentengiso yabahambi ngeenyawo, kunye nezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, ebusuku. iiklabhu, umculo ophilayo, iivenkile zeencwadi, iikhefi, iivenkile, njl.
Kukho amagumbi okulala amabini amakhulu, igumbi labantwana elincinci kunye nendawo yesine yokulala kwindawo yeTV. Sineebhedi ezilingana nokumkani ezinento yokulala etofotofo kumagumbi okulala amabini aphambili kunye neebhedi ezimbini ezingatshatanga kwigumbi labantwana kunye nebhedi enye kunye noomatrasi owongezelelekileyo kwindawo yeTV.
Iimpawu ezikhethekileyo zendlu ziquka umgangatho womthi oqinileyo, igumbi lokuhlala elikhulu eliphindwe kabini elinendawo yomlilo, ikona yelanga, i-TV kunye neebhalkhoni ezimbini.
Iintsuku eziyi-7 e Gangtok
4.92 · Izimvo eziyi-93
Ukuthenga, ukubona indawo, iMG Marg, ivenkile yabahambi ngeenyawo, iidisco, iindawo zokutyela, iikhefi, iindawo zokuphumla, umculo ophilayo, iivenkile zeencwadi, i-emporium yezandla zikarhulumente, iposi, isikhululo samapolisa, isibhedlele - yonke into enokwenzeka ikumgama wokuhamba.
Ezinye iindawo ezibalulekileyo zabakhenkethi kukuhamba okufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Prashant
Ndifumaneka nanini na iindwendwe zindifuna. Iofisi yam inomgangatho omnye ongaphantsi kwendawo yokuhlala.